Weeraryahanka kooxda Ac Milan Mario Balotelli ayaa farxad ku soo dhaweeyey ka qayb gallkiisa kulankii 50 aad ee uu u safto Naadiga iyo Goolkii 30 aad oo uu maanta u dhalliyey, kuna adkaystay in goolasha dhalintooda uu sii kordhinayo.
Xidiga qaranka Talyaaniga, ayaa goolkii furitaanka u dhalliyey Milan kulankii Maanta ay sida xaragada leh 3-0 ka ugu dhaaftay kooxda sii dhaadhacaysa ee Livorno.
Goolkan uu dhalliyey ayaa noqonayay kiisii 14 aad ee Seria A uu ka dhaliyo xili ciyaareedkan, taas oo macneheedu yahay inuu goolkani ka dhigayo Super Mario xili ciyaareedkii uu ugu gool dhalinta badnaa , waxaanu ku faraxsan yahay Rikoodhka cusub, wuxuuse ballan qaaday inuu sii kordhinayo.
“Waxaan ku faraxsanahay guusha aan gaadhay ee dhinaca rikoodhka gooldhalintayda ee hal xili ciyaareed,” ayuu ku yidhi warfidiyaha La Gazzetta dello Sport. “Laakiin sidoo kale xili ciyaareedyadii hore, gaar ahaan markaan joogay England, Waxaan dhalliyey goolal intaas ka badan.
“Aad baan ugu riyaaqsanahay inaan gaadho rikoodh ka 14 gool, waana inaan sii kordhiyaa dedaalka, waxa jira ciyaaryahano dhaliya 40 gool sanadkii.”
Real Madrid vs Leganes 1-2 All Goals & Highlights 24/01/2018 HD – #CopadelRey
Draxler Oo £34m Ugu Wareegay PSG
Kroos: “Waa Caddaalad Darro in Neuer Uu Ka Dambeeyo Messi”
Kooxda Manchester United Oo Soo Ban-dhigtay Garamadeeda 1-aad Ee Xilli Ciyaareedka Soo Socda + Sawirro
Mourinho: ‘Wenger Ha Iska Tago Intaan La Eryin’ – Mourinho Oo Kula Taliyey Wenger Inuu Raaco Jidkii Ferguson